Rohingya Students Forum: April 2017
Posted by Rohang king at 9:42 AM
ဦးကိုနီ ဦးကိုနီအမည်နှင့်လိုက်အောင်စွမ်းဆောင်သည်။သူ့အသက်ကို အမှု့မထားအမှန်တရားတွေကိုထုတ်ဖော်သွား။
ကမ္ဘာချစ်တဲ့ အမေစုထိပ်တန်းရောက်အောင်သူပြုစုဦးကိုနီရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု။
မြန်မာပြည် ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်သားဦးကိုနီကို ကမ္ဘာလေးစားကျွန်တော် ထပ်ဆင့် ပြောချင်သောစကားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ညီအရင်း အလား။
မြန်မာရှိသရွေ့ တို့မမေ့ပြီဦးကိုနီ တစ်ယောက်တဲ့ကောင်းသော ဘုံဘဝသို့ရောက်ပါစေ။
Posted by Rohang king at 12:37 AM
Uttor doine sissijja,
Arakan añárar Háñzaiya.
Zóror khál baricá,
Cúná ruwe dán laga.
Bái yé bái yé ek katta,
Arakan aññárar sólluikká.
Cítor khále laga,
Mokka, góiccá, sóiñ doillá.
Torki táke muúmé,
Arakan aññárar cáané.
Fudine kula dán dai,
Zit or baza baái.
baricá = မိုးရာသီ။
baái = တီးမှုတ်သည်။
baza = တူရိယာတစ်မျိုး။
Cúnali dán = စပါးရွှေဝါ။
dai = ရိတ်သိမ်းသည်။
doillá = အမျိုးမျိုး။
doin = တောင်အရပ်။
ek kaththa = တစည်းတရုံးတည်း။
góiccá = နှမ်း။
Háñzaiya = တန်ဆာဆင်ထားသည်။
laga = စိုက်ပျိုးသည်။
Mokka = ပြောင်း။
muumé = ရှေ့သို့ချီ။
Rit = ရာသီ။
ruwe = စိုက်ပျိုးသည်။
sissijja = သွယ်တန်းလျက်။
sóiñ = ပဲ။
sólluikká = ညီညွတ်သော။
Tinga = သုံးမျိုး။
Torki = တိုးတက်မှု။
Uttor = မြောက်အရပ်။
Zit = အောင်မြင်ခြင်း။
Zóror khál = မိုးတွင်းကာလ။
Posted by Rohang king at 2:50 AM
လင်္ကာရည်ကျော် စာအုပ်စုစည်းမှု ( ၁၈ ) အုပ်
၃။ အမြူတေရတနာနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
( 11 .5MB ) စာမျက်နှာ - ၁၇၈
၄။ ချစ်စရာ့ အိမ်ကလေး
၆။ တိမ်ညိုမှာငွေဇာကွပ်ကယ်နှင့် .
၇။ တိမ်တွေ တောင်တွေနှင့်ခရီးသည်
၈။ ပထမအိပ်မက် ဝတ္ထုတိုများ
၁၃။ ဝိုးတဝါးအတွေးစများနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
၁၄။ သိင်္ဂါရအလှည့် ဝတ္ထုတိုများ
၁၅။ ဒေါက်တာရွှေသွေးနှင့် မပန်းမှုံ
၁၇။ သောင်တင်နေတဲ့ ကြယ်ငါးကလေးတွေ
၁၈။ နှလုံးသား ညာဘက် အပေါ်ခန်း ဝတ္ထုတိုများ
Guitar တီးနည်းစာအုပ်များဂီတ (၁၇အုပ်)
(၁) Rock Guitar တီးနည်း (ညီညီထွေး)
(၂) လိဒ်ဂစ်တာ တီးခတ်နည်း (ဂီတမှူး P.Morgan)
(၃) သီချင်းဆိုလေ့ကျင့်လိုသူများအတွက် Vocal Lesson (ခိုင်ကျော်)
(၄) အဆင့်မြင့် လိဒ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း (ခိုင်ကျော်)
(၅) အခြေခံကီးဘုတ်တီးနည်း (ခိုင်ကျော်)
(၆) အခြေခံစန္ဒယားတီးနည်း (ခိုင်ကျော်)
(၇) မဟာဂီတ ပေါင်းချုပ် (မဟာဂီတ ဦးပြုံးချို)
(၈) မြန်မာ့မဟာဂီတ (လူထုဒေါ်အမာ)
(၉) Fl Studio 10 စာအုပ် (၀င်းဟိန်း)
(၁၀) အခြေခံဒရမ်တီးခတ်နည်း (ထက်မိုး)
(၁၁) ကော့ဒ်တစ်ခုမှ ကော့ဒ်တစ်ခုဆီသို့ သီချင်းရေးလိုသူတွေသိထားရမည့်အသံ (၅)သံ (အလိမ္မာ)
(၁၂) ကီးနှင့်ကောဒ် (အလိမ္မာ)
(၁၃) ကော့ဒ်များဖြင့် တေးသီချင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း (အလိမ္မာ)
(၁၄) အိတ်ဆောင် ဂစ်တာကော့ဒ် (ကိုပေါက်)
(၁၅) လိဒ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း ဒုတိယဆင့် (ကိုပေါက်)
(၁၆) ဆရာလွတ်အခြေခံ လိဒ်ဂစ်တာကော့ဒ် (တက္ကသိုလ်နိုင်ဝင်းထွန်း)
(၁၇) ဘေ့စ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း ( P.morgan)
🔎 စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင်အပုဒ်( ၁၀၀ကျော် )
🔎 ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
🔎 ဗေဒင် (၈ အုပ်)
🔎 ဥပဒေဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
🔎 စီးပွားရေး စာအုပ်များ
🔎 မျက်လှည့် စာအုပ်များ
🔎 ကဗျာ စာအုပ်များ
🔎 ဂီတဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
ကလျာ(၀ိဇ္ဇာ-သိပ္ပံ) စာအုပ်များ (၃အုပ်)
ကံချွန်၏ စာအုပ်များ (၇ အုပ်)
ကိုပိုက်စာအုပ်များ (၆ အုပ်)
ကျော်ထူး ဝတ္တုစာအုပ်များ (၆ အုပ်)
ခင်ခင်ထူး ဝတ္တုစာအုပ်များ (၉ အုပ်)
ခင်ဆွေဦး စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ခင်စောတင့် စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ခင်နှင်းယု စာအုပ်များ (၁၃ အုပ်)
ခင်မျိုးချစ် စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
ခင်မောင်ဇော် စာအုပ် (၁ အုပ်)
ခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်) စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ချစ်ဦးညို စာအုပ်များ (၁၆ အုပ်)
ခွန်ချိုငြိမ်းချမ်း စာအုပ် (၁ အုပ်)
စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင် (စာရေးဆရာများ) အပုဒ်၁၀၀ ကျော်
အကြောင်း စာအုပ်များ(၃၂)အုပ် စုစည်းမှု
၁။ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ (ဦးပုလေး)
၂။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်း (တက္ကသိုလ်နေဝင်း)
၃။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကြိုးပေးခြင်းခံရသော ဂဠုန်ဦးစော (အာဇာနည်သွေး)
၄။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စီးပွားရေးအမြင် [တင်စိုး (ဘောဂဂုဏ်)]
၅။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကျောင်းသားဘဝ ဒိုင်ယာရီ (တင်နိုင်တိုး)
၆။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရေနံချောင်းအမျိုးသားကျောင်းသားဘဝ (ရေနံ့သာဝင်းမောင်)
၇။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နိုင်ငံရေးဂန္တဝင် (မောင်ကျော်ရင်)
၈။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကဗျာများ (လူစုံ)
၉။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ (ဦးခင်အောင်)
၁၀။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများ
၁၁။ ဗိုလ်ချုပ် ပြောခဲ့တဲ့စကား၊ ဗိုလ်ချုပ် ဟောခဲ့တဲ့ စကား (နန္ဒာမိုးကြယ်)
၁၂။ ၁၉၄၅ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်)
၁၃။မ.ဆ.လခေတ် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံမှု (မင်းပုည)
၁၄။အောင်ဆန်းဦးတို့ အဖေ (တက္ကသိုလ်နေဝင်း)
၁၅။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထ္ထုပ္ပတ္တိ (ဗိုလ်သိမ်းဆွေ)
၁၇။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်၁၀၀ စာ၁၀၀ (ကလောင်စုံ)
၁၈။ ကိုးယောက်က သတ်လို့ ကိုးယောက်က သေတဲ့ လူသတ်ပွဲကြီး (ဒေါ်အုန်းကြည်သား)
၁၉။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် (ပန်းဝေဝေ)
၂၀။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ဂဠုန်ဦးစော (နေစိုးထက်)
၂၁။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး အရေးတော်ပုံ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
၂၂။ ဗမာ့နိုင်ငံရေး သုခမိန် (မောင်ထင်)
၂၃။ ဗမာ့အောင်ဆန်း (မောင်ထင်)
၂၄။ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုရှာပုံတော် (ဇေယျသူ)
၂၅။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြည်ချစ်ပန်း (ကာတွန်းညီပုချေ)
၂၆။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေးဘဝဇာတ်ကြောင်း
၂၇။ပြည်ထောင်စုဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (တက္ကသိုလ်နေဝင်း)
၂၈။ ရဲဘော်သုံးကျိပ် (ကျော်ငြိမ်း)
၂၉။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အထ္ထပ္ပတ္တိအကျဉ်း (မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်)
၃၀။ ဦးအောင်ဆန်း၏နောက်ဆုံးနေ့ (ဒဂုန်တာရာ)
၃၁။ အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း (သတင်းနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့)
Virus ​ရေးနည်းမျိုးစုံနဲ့ အခြားစာအုပ်​များ
®Funny virus ရေးနည်း
®Dangerous virus ရေးနည်း
®Dangerous virus ရေးနည်း2 နှင့်ကာကွယ်နည်း
®Turbo C programming စာအုပ်
®How to do network setting စာအုပ်
®Basic Hacking By bigg nay
®Gmail အကြောင်းသိထားသင့်သည့် Tipများ
Posted by Rohang king at 11:33 AM